यो महत्वपूर्ण मिति हृदयको आगमन अघि सधैं उपहार, आनन्द, मैत्री सभा को अघिबाटै जान्ने काम आनन्द संग रोक्छ। तर केही मानिसहरू विभिन्न कारणहरूले गर्दा, आफ्नो जन्मदिन रुचि छैन। तिनीहरूले कम्तिमा एक वर्ष हो भन्ने तथ्यलाई, तर पुरानो रही कसैलाई। र केही विशेष गरी आर्थिक विषयहरू, तनाव तिनीहरूले खर्च हुनेछ कति गणना एक चाड खाने, र अनुमान को घोषणा गरेर तिनीहरूले खराब मुड छ। जीवन त प्रत्येक समय समयमा economize बाध्य भनेर गठन गरिएको छ। तर यो बिदाको आफैलाई वंचित गर्न कुनै कारण छ। सस्ती सेट कसरी आफ्नो जन्मदिन लागि तालिका: त्यसैले, हामी प्रश्नको जवाफ प्रयास गर्नेछ?
जब मान्छे जन्मदिन मनाउन थाले? त्यहाँ दुई संस्करणहरु छन्। पहिलो, रोमी अनुष्ठान को परम्परा आधारित अनुसार, देवताहरूको सम्मान मा प्रबन्ध मिलाए। विधर्मीहरूलाई हार्दिक टेबल, बधाई उपहार को एक किसिम दिइएको थियो सुनिन्थ्यो। यो परिकल्पना थप आधुनिक छ। दोस्रो संस्करणमा परम्परा को जरा जान्छ फिर्ता प्राचीन कि भन्छन्, जब आफ्नो जन्म दिन मानव अस्तित्वको विशेष समस्याका बारे विश्वास। यसलाई कुनै पनि इच्छा वा curses निम्न मिति मा दुई पटक प्रभाव छ भनेर विश्वास थियो। तसर्थ, भेटी प्राचीन मानिसहरू तिनीहरूले नवजात कुनै हानि गर्न भनेर आत्माको शान्त गर्नु खोजे।
दिन फ्लाई साहसी गूंज नाम
जन्मदिन बिस्तारै व्यक्तिगत गर्न सारे, तर लामो समय को लागि कुनै एक बच्चाहरु र महिलाहरु को जन्म मिति ध्यान भुक्तानी। जसको जन्मदिन महान् मात्रा मा मनाइन्छ पहिलो महिला, सुन्दर क्लियोपेट्रा थियो। भर्खरै नै मान्छे रेकर्ड र महिलाहरु 'जन्मदिन मनाउन लिइएको थियो।
युनानी र मिश्रीहरूले र अक्सर pathetic देवहरूको र फिरऊनको र राजाहरूको जन्म मिति उल्लेख गरे। कहिलेकाहीं, जेल कैदीहरूलाई देखि जारी फिरऊनले ज्योति को उपस्थिति को अवसरमा। साधारण परिवार मा परिवार को टाउको को जन्म मनाउन एक दिन अभ्यास।
पापको छूट लागि मानिसलाई दिइएको जीवन, त्यसैले उहाँले मजा छैन: सुरुमा यो प्रश्न मसीहीधर्म स्थिति धेरै गाह्रो थियो। पछि, चर्च केहि relented र christening नाम दिन दिनुभयो। तर सोभियत प्रणाली प्रतीकात्मक बोल्ने नाम-र, विरुद्ध थियो, परम्परा आफ्नो फलाम बुट stamped। पनि प्रसिद्ध फ्लाई-जन्मदिन केटी Corneille पुरानो कामहरू देखि फिर्ता गर्न आदेश दिए।
खैर, रूस मा नाम दिन धेरै लोकप्रिय थिए: सुखा आवारागर्दी ~, पकाएको स्वादिष्ट बियर, पकाएको Pies र सधैं गीतहरू गाए। को पाठ्यक्रम, देश बिदा राजा भन्दा धेरै भद्र थिए: नाम दिन सम्राट मा खर्च कहिलेकाहीं राशि, यो धेरै लक्जरी महलों निर्माण गर्न सम्भव थियो।
एक आश्चर्य संग केक
यो साधारण मान्छे सधैं आफ्नो जन्मदिन लागि तालिका सेट गर्न स्वादिष्ट र सस्तो को सपना देख्यो गरेको स्पष्ट छ। तर एक केक बिना के भोज? केही मानिसहरू थाहा छ तिमी हामीलाई आए जहाँ, यो जन्मदिनको एक अपरिहार्य विशेषता छ। तपाईं गहिरो खन्न भने, यो विचार अन्धकार पुरातन देवताहरूको सम्मान मा पवित्र वेदीहरू रोशनी गर्दा मूर्तिपूजक पटक फेरि आएको मानिन्छ। तर परम्परा जर्मन गढा। तिनीहरूले एक साधारण अनुष्ठान बच्चाको जन्मदिन उत्सव सिर्जना गर्नुभएको छ। यो गर्न, हामी वर्ष को संख्या र किरण मा बच्चा उठ्दै दिन को लागि एक नायक, आफ्नो अनुग्रह-गाया गीतहरू द्वारा प्रतीकात्मक वस्तुहरु, शीर्ष रोशनी मोमबत्ती को एक किसिम लुकेको जो एक स्वादिष्ट केक, तयार। यसलाई सम्म तालिका सारा परिवार पूरा गर्दैन केक, साँझ सम्म खान थिएन कि विचारणीय छ। बच्चा कदर कुरा विचार गर्न हुनुपर्छ, र एक पटक मा मोमबत्ती बाहिर झटका। परिचित?
दिन जाम: आफ्नो बेहोरा
विभिन्न देशहरूमा यस्तो बिदाको लागि भिन्न छन्। वार्षिकोत्सव गरेर संसारमा अधिकांश मानिसहरू को Reverent मनोवृत्ति। तर केही मानिसहरूका बस अनौठो वा गैर-राउन्ड विकल्प भन्नुहोस्। विभिन्न परम्परा: इटाली तालिका मा एक अपरिहार्य पकवान स्पेगेटी को जन्मदिन (एक लामो समय बस्ने) हुनेछ, र ल्याटिन अमेरिका मा आवश्यक उनको उपहार संग लोड piñata तोड्न।
ब्रिटिश, 80 वा बढी वर्ष सम्म बाँचे, म उनको Majesty बधाई। तर सबैभन्दा अभागी जन्मदिन जापान सट्टा बच्चाहरु को बाँच्न आमाबाबुको अभिवादन र साधारण मात्र 60 वर्ष पछि उपहार दिन स्वीकार गरे।
नियम आर्थिक तालिका
को पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री भने, जन्मदिन केटी अझै पनि प्रियजनहरूलाई यसको सत्कार छत अन्तर्गत भेला गर्ने निर्णय, तर क्षमताहरु को आवश्यकता, उत्पादन त्यहाँ commensurate गर्न चाहन्छ। बिल्कुल doable कार्य - उहाँले दिन लायक देख्यो सस्ती, स्वादिष्ट, र पनि यति आफ्नो जन्मदिन घर लागि तालिका सेट गर्नुहोस्। यो गर्न, एक सरल नियम पालना गर्नुहोस्:
अग्रिम मेनु विचार गर्न निश्चित हुन। s किताबहरु कुक मा राम्रो rummage, पत्रिका मार्फत। यो सामाग्री ध्यान आवश्यक छ: यो मौसमी उत्पादन किन्न सस्ता छ, र यसैले एक संवाददाता मेनु चयन गरिएको छ। को पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री, फोटो विशेष गरी स्वागत आफ्नो जन्मदिन घर किफायती व्यञ्जनहरु लागि तालिका सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने किनभने एक पटक यो देखिने छ, टेबल मा व्यञ्जन हेर्नेछ।
सही अतिथि को संख्या (सहित को पाठ्यक्रम र केही निमन्त्रणानगरिएकोजडान अतिथि) गणना गर्न। तपाईं हट अंश पकाउन सक्छ, तर यो मामला मा जन्मदिन केटी आराम छैन। राम्रो अझै पनि शेयर संग साधारण पकवान बनाउन।
को जन्मदिन मेनुमा पहिलो पाठ्यक्रम, नियम, समावेश गरिएको छैन। अपवाद विदेशी उम्दा सूप छन्।
तपाईं एक परम्परागत उत्सव योजना छ भने, त्यसपछि हामी तालिका आफ्नो जन्मदिन लागि घर inexpensively सेट गर्न सक्नुहुन्छ। व्यञ्जनहरु बजेट व्यञ्जन आफ्नो स्वाद को लागि कुनै पनि स्रोत पाउन सकिन्छ। तर छुट्टी मेनु चिसो र तातो नाश्ता, मुख्य पकवान (मासु वा माछा), सलाद र मिठाई समावेश हुनुपर्छ।
रक्सी - तिनीहरूले मुड को डिग्री वृद्धि भएकोले Pun क्षमा, छुट्टी तालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता पनि छ।
भद्र काटन र शानदार रोल
धेरै परिवार क्लासिक लामो परम्परा पालन र तालिका मनपर्ने व्यञ्जन अतिथि हृदय द्वारा थाहा राख्नु। तर यो दृष्टिकोण यसको लाभ छ: मान्छे कहिल्यै भोक जानेछ, र सन्तुष्ट हुन प्रत्याभूति।
स्वामित्व मासु, चीज र तरकारी काटन मानक चिसो appetizers बीचमा। यो शास्त्रीय दृष्टिकोण अझै पनि जो कोहि असफल कहिल्यै छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, काटन को भाग रूपमा ग्रेड को एक किसिम। सबैलाई यो एक चिसो खाजा कुनै पनि भोजन सुरु गर्नुपर्छ छ थाह छ। यो तथाकथित संगठनात्मक कारक: यो कुनै एक लेट हुने छैन भन्ने आशा गर्न बेकारी छ। र अन्य अतिथि प्रतीक्षा गर्दा धेरै राम्रो, खान खाली पेट मा पिउन छैन गर्न सक्षम हुनेछ।
cheaply आफ्नो जन्मदिन घर लागि तालिका सेट गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूका लागि, कोरियाली नाश्ता आदर्श हो: सबै (पूर्व-टेस्टिङ खाना) को एक सानो किन्न र सानो प्लेट एक तालिका बाहिर फैलियो। पाहुनाहरूको घर अचार र marinades को राम्रो तरिकाले मांग रूपमा।
उहाँको जन्मदिन लागि तालिका सेट गर्न कसरी स्वादिष्ट र सस्तो सामना लागि एक्सप्रेस व्यञ्जनहरु हो: चिसो रोल र appetizer रोमान्टिक नाम "Raffaello" संग। निम्नानुसार पहिलो तयार छ:
Lavash को पातलो पाना मिलेर एक मिश्रण संग lubricated: मेयोनेज, लसुन, डिल र कसा भयो पनीर;
शीर्ष प्रसार thinly छम कटा;
थप कदम बारम्बार छन्;
द्वारा पूछे जाने एक रोल मा लुढका;
उत्पादन प्लास्टिक र्याप मा र्याप र कम्तिमा2घंटा लागि फ्रिज मा हटाइयो।
सेवा सस्तो छ, तर मूल पकवान यो एक ला कार्टे टुक्रा मा धेरै धारिलो चक्कु छ कटौती गर्नुपर्छ।
"Raffaello" खाना जस्तै सामाग्री आवश्यक:
काजू (तर सुरक्षित गर्न, तपाईं ओखर नट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ)।
पनीर, बोसो मेयोनेज र लसुन को मिश्रण नट कर्नेल रोल्ड। यसबाहेक, राम्रो grater मा स्थिर केकडा लाठी rubbed। tortom केकडा मासु boned मा चिज बलमा एक आश्चर्य संग: पकवान तयार छ। यो नुस्खा सहित, तपाईंलाई छिटो र inexpensively आफ्नो जन्मदिन लागि तालिका सेट गर्न कसरी रहस्य प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। ती बलमा उत्सव देख्यो गर्न, तिनीहरूले ताजा सलाद पात फैलियो।
तपाईं पनि सिजन मा भाँडा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बजेट विकल्प मेनू गर्मी बनेको छ। उदाहरणका लागि, बैगुन ट्याबहरू वा औंलाहरु लागि। दोस्रो विकल्प अधिक महंगा, यो एकदम एक बिट छ, तर मासु समावेश।
आकर्षक तातो नाश्ता
पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री, आफैलाई सोध्न आफ्नो जन्मदिन लागि तालिका सेट गर्न कसरी स्वादिष्ट र सस्तो गर्म appetizers बिर्सनु हुँदैन। हामी सबै तालिका वरिपरि भेला हुँदा तिनीहरूले चिसो पछि गएर यो पहिलो टोष्ट लागि समय। त्यहाँ धेरै हुनु हुँदैन, र तिनीहरूले बस सेवा अघि तयार छन्। यो सजिलो पकवान, साना आकार सर्विंग्स द्वारा विशेषता छ जो। यस्तो नाश्ता को एक उदाहरण मासु tangles तयार गर्न सजिलो बन्न सक्छ:
परम्परागत, cutlet mincemeat, कच्चा अन्डा को वाहेक छ;
समाप्त आटा सिउनी रोल्ड र स्ट्रिप्स मा कटौती छ;
आटा किसिमहरु को मासु बलमा एक तार प्रकार मा घाउ छन्;
पकाएको सम्म पकवान ओवन मा सुखा छ।
यो धेरै दिन लायक स्टार्टर देखिन्छ।
अब पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री लागि आफूलाई बस पत्रिका, s किताबहरु कुक, इन्टरनेट पोर्टल बाहिर हाम फाल्न घर सस्तो व्यञ्जनहरु आफ्नो जन्मदिन लागि तालिका सेट गर्न समस्या छैन। यहाँ, उदाहरणका लागि, एक हास्यास्पद छिटो तयार छ जो, र बस charmingly स्वाद julienne समान एक पकवान। एक क्रीम सस मा Housewives मशरूम को ध्यान परिचय। यो जस्तै पकवान तयार:
एक ध्यान प्याज तलना र गाजर बारेमा 10 मिनेट को लागि साफ मशरूम र स्ट्यु थपिएका छन्;
पछि खट्टा क्रीम, मसला राखिएको र सबै कोमल सम्म stewed।
यो grated पनीर र जडीबुटी संग शीर्ष छिडकना भने, र माटोको बर्तन मा लागू एक सरल पकवान सुन्दर हुन सक्छ।
तपाईं cheaply आफ्नो जन्मदिन घर लागि तालिका सेट गर्न बाहिर सेट भने, यो सलाद बिना गर्न सक्नुहुन्न। परम्परागत दृष्टिकोण लागि Olivier माछा, "मिमोसा star name" वा लुगा अनुरूप हुनेछ "सम्राट्लाई।" तपाईं जस्तै उत्पादनहरु आवश्यक थियो जो सरल विकल्प, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
पाहुनाहरूको को दरवाजे मा शाब्दिक वा अकस्मात आएको बेला यो सलाद उपयुक्त छ। यो सबै घटक बस एक पूर्व-व्यक्तिगत तयार सँगै मिश्रित गर्दै छन्, आवश्यक छैन।
मूल विशेष गरी तिनीहरूले अतिथि को महिला आधा स्वाद गिर, समुद्री संग सलाद लाग्न सक्छ।
भोजन को मुख्य आपूर्ति
एक धेरै महत्वपूर्ण बिन्दु artistry कराउछ पछि जब: "Fyodor! खेल! "स्याउ र सुकेको खुबानी संग भरी पाकेका धुनमा appetizing, उदाहरणका लागि, टेबल मा देखिन्छ। तर प्रश्न खेल हो के मा, आफ्नो जन्मदिन को लागि तालिका कसरी सस्तो सेट थियो? यो धुनमा Bake गर्न छैन, एउटै चिकन संग गर्न सकिन्छ। तपाईं सारा चरा, र उनको खुट्टा वा पखेटा प्रयोग गर्न सक्दैन। तिनीहरूले राम्रो अचार, र मह मा रोल हो भने, तपाईंले एक स्वादिष्ट खस्ता पाप्रो एक ठूलो भोज प्राप्त।
सामान्यतया, मुख्य आपूर्ति निर्धारण अघि, एक आश्चर्य पर्छ, कि तपाईँको अतिथि जस्तै: मासु वा माछा? त्यसपछि मात्र तपाईं coveted मुख्य पकवान पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, मासु भन्दा माछा धेरै पटक थप समस्या, तर भरी आक्षेप वा पाइक साँच्चै उत्सव हुनेछ र अतिथि लामो सम्झना गरिनेछ। उत्सव तालिका मासुको चोक्टा, cutlets, स्टिक्स वा medallions लागि राम्रो लजको। एउटा कुरा निश्चित छ - टेबल मा मासु आवश्यक वर्तमान हुनुपर्छ।
, मसले आलु, फ्रान्सेली फ्राइज़, तला जडीबुटी संग उसिनेर: मुख्य कुनै पनि रूप मा आलु चयन गर्न व्यञ्जन लागि Garnish।
आफ्नो जन्मदिन सस्तो, पकाउने व्यञ्जनहरु लागि तालिका सेट - यो पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री गर्न आवश्यक छ कि सबै छैन। पेय महत्त्वपूर्ण। निस्सन्देह, compotes, रस, कार्रोप्नेटेड पेय, शायद यो पनि कप बिना छैन। के रक्सी बारेमा? यो रक्सी पिउने उत्सव तालिका विशेषता हुनुपर्छ रक्सी र अन्य मदिरा गर्दछ मा त, सबै कुरा छैन कि मनमा महत्त्वपूर्ण छ।
मिठाईहरू लागि चिया वा कफी आवश्यक। रूपमा मिठाई, को पाठ्यक्रम, क्लासिक संस्करण सेवा मोमबत्ती संग केक, तर सस्तो एक जन्मदिन को लागि एक उत्सव तालिका ढाक्न? को केक बरु महंगा खुशी पछि। आफ्नो हातमा एक केक Bake कि त, कि त केक, कुकीहरू वा कैंडी किन्न: एक समाधान छ। बाटो, मिठाई गरेर, व्यक्तिगत, कुनै पनि खरिद उत्पादन भन्दा राम्रो, को पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री एक पकवान प्राण लगानी छ किनभने पकाएको।
भाडामा दिइएको रहस्य
दक्ष सेवा र व्यञ्जन सजावट: आफ्नो जन्मदिन सस्ती घर लागि तालिका सेट गर्न, तर एकै समयमा यो स्मरणीय बनाउन, यो मुख्य गोप्य थाहा आवश्यक छ। यो उनको समय को लागि खेद महसुस गर्न आवश्यक छैन।
सेवा र सजाय लागि के आवश्यक छ:
Tablecloth। क्लासिक संस्करणमा सेतो छ, तर अन्य रंग अनुमति छ।
बर्तन। कटलरी र चश्मा एक चम्कने गर्न मंजना पर्छ। अवसर को लागि, यो आफ्नो granaries सेवा सबै भन्दा राम्रो प्राप्त गर्न उपयोगी छ।
अतिथि को संख्या मा कपडा बारे मा भूल छैन। तिनीहरूले सुन्दर Lay छालहरू हुन वा तथ्याङ्कले को रूप मा गर्न सक्नुहुन्छ।
मटर, जैतून को प्रकार को लागि व्यञ्जन साग, उज्ज्वल जामुन, Cranberry सजाउनु। figural लागि काटन तरकारी र फल विशेष चक्कु, यो किन्न एक राम्रो विचार छ। तपाईं प्रश्न सोध्न भने: कसरी आफ्नो जन्मदिन लागि तालिका सेट सस्तो व्यञ्जनहरु धेरै आश्चर्य हुन सक्छ। र मात्र होइन धेरै महँगो र तिनीहरूलाई वर्णन स्वादिष्ट, तर पनि दिन लायक उपस्थिति छ। किनभने जब तपाईं खाना हेर्न भोक आउनु पर्छ पकवान, ठीक सजाया छ किनभने यो छ।
यो आवश्यक छैन एक वा दुई भोजन लागि बाहेक,, पाक प्रयोग धेरै खर्च सबै रूपमा सामान्य हुन दिनु हो।
उत्सव तालिका फल र तरकारी किसिम वितरित छैन। तपाईं बलियो पिउन योजना भने, त्यसपछि पोसिलो र हार्दिक खाजा हेरविचार।
सस्ती सेट रूपमा जन्मदिन बच्चाको लागि तालिका, त्यसैले उहाँले शायद, धेरै आमा सोच्न खुसी थियो। वास्तवमा यो एकदम सजिलो छ। त्यहाँ जो तपाईं बच्चा र आफ्नो मित्रहरुलाई एउटा अविस्मरणीय उत्सव बनाउन प्रयोग गरेर केही सुझाव छन्:
कागज tableware उज्ज्वल रंग - सुरक्षित र सुन्दर, र केहि धुन छ;
कोठा सजावट बल, कागज चित्र मूलढोकाको सामुन्ने राखिएको;
सानो भाँडा - ज्यादातर तपस, सलाद kremanki, विभिन्न toppings, चिकन croquettes संग द्वारा पूछे जाने रोटी रोल - बच्चाहरु पाठ्यक्रम, यो मीठो नभएसम्म, overeat गर्न रुचि छैन;
vodohlobam घर बनाएको कागति पानी, फल पेय, रस, फल पेय र दूध-फल ककटेल प्रस्ताव;
प्राथमिकताको curd मिठाईहरू देखि;
खट्टा क्रीम र दही राम्रो सलाद।
हाम, पनीर, तारा, सर्कल मरिच, जैतून, मकै, झिंगा: सबै canapés फिट गर्न। prick केले, अङ्गुर, kiwi skewers मा: मिठाई संस्करणको रूपमा निम्नानुसार छ।
उबला चिकन, टमाटर, खुर्सानी र मेहनत उसिनेर अन्डा को, एक स्वादिष्ट सलाद बनाउन सक्छ पछाडि agaric एक फ्लाई एक पोथे्र दम्सी को रूप मा यो सजाउनु। सलाद राखे तहहरू: कटा चिकन टमाटर → → → चोट अन्डा मरिच grated। प्रत्येक तह मलाईदार दही लाउने greased छ। बँदेल कसा भयो गाजर र थूथन चिन्ह अन्डा सेतो प्रयोग गरि छर्कियो गर्नुपर्छ। आँखा र नाक जैतून र छाँट्दछ र amanita अन्डा र टमाटर बनाइएका छन्।
यो एक उत्सव वातावरण सिर्जना गर्न र सक्रिय सार्न malyshni अनुमति महत्त्वपूर्ण छ।
अन्तमा, तपाईं समय न त भान्सा मा समय खर्च गर्न इच्छा न कि केही विचार सुझाव गर्न सक्छन्, तर प्राण एक छुट्टी आवश्यक छ। को पकाउने वा रेस्टुरेन्ट देखि तयार बनाएको खाना खरीद द्वारा, घर सस्तो र सकेसम्म स्वादिष्ट मा आफ्नो जन्मदिन लागि तालिका सेट गर्नुहोस्। यस संस्करणमा विशेष उपयुक्त जवान उन्नत कम्पनीहरु छ। तपाईं पिज्जा, तैयार ग्रील्ड चिकन र सलाद आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति अधिक महंगा जापानी भोजन खर्च हुनेछ।
त्यहाँ रोचक र आधुनिक संस्करण हो - एक बुफे। तर यो निश्चित नियम विषय हो:
डिस्पोजेबल भाग मा अलग;
भोजन skewers मा मुख्य रूप हुनुपर्छ;
तपाईं एक ठूलो तालिका मा उपहार को सबै प्रकार अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ;
इनपुट बास्केट मा हुन वा पेनकेक्स पहिले तिनीहरूलाई कटौती भएको बनाउन;
यदि खुवाउनुभयो चिकन खुट्टा, हड्डी एक कपडा संग र्याप।
मादक पेय uncorked गर्नुपर्छ, र अतिथि प्रदान चश्मा र चश्मा गर्न पक्का छन्। तर एक विशाल प्लस जन्मदिन केटी लगातार प्लेट र कटलरी परिवर्तन गर्न छैन कि हुनेछ।
सबैभन्दा रोचक विकल्प प्रकृति मा एक जन्मदिन हुनेछ। को गर्मी महिनामा जन्म खुसी मान्छे, तपाईं यसको थाह छ। पिकनिक, बारबेक्यू, बारबेक्यू, हावा र सूर्य - के थप आकर्षक हुन सक्छ? तर पनि यहाँ nuances:
मेयोनेज संग सलाद - यो पिकनिक मा छैन सिफारिस व्यञ्जन;
मासु अग्रिम खटाई मा हालन गर्नुपर्छ;
खानेपानी हेरविचार गर्नुपर्छ;
स्यान्डविच र सह भोजन घर बाट लिन सकिन्छ।
र खरानी मा आगो कस्तो स्वादिष्ट pilaf वा सुखा आलु!
तर कुनै कुरा को जन्मदिन केटा छनौट के, मुख्य कुरा हो - यो एक उत्सव मुड र प्रियजनहरूलाई द्वारा नजिक छ।
मार्च 8 औं। छुट्टी इतिहास
कसरी कुनै कारण मेरो आमा खुसी पार्न?
चिनियाँ धब्बा - चमत्कार, सबै उपलब्ध
Mentors को समीक्षा: "आवाज" सिजन4देखाउँछ। परियोजना "आवाज" सिजन4बारेमा अतिथि दर्शकहरूलाई
गोदाम प्रबन्धक - कर्तव्य र अधिकार
को बास्केटबल घन्टी र ढाल को आकार
माइक्रोवेवमा पनीर केक पाक कला
ग्रोजनी - Chechnya राजधानी। विवरण, इतिहास, फोटो
रातो मा केटी - यो खतरनाक छ: रातो पोशाक संग रातो जूता लगाउने सक्नुहुन्छ?
"बोलेरो" (क्लब)। Kharkov: शहर क्लब संस्कृति